काठमाडौँ, ११ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहाँनेर बदनियत राखेको हो ? भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा जारी संवैधानिक इजलासमा मल्लले उक्त प्रश्न गरेकी हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । अहिले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने प्रश्‍न उठिरहेको छ । न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्ने हो कि होइन ? र, अब सरकार चलाउन सकेन, दलले साथ दिएन, बाध्यताले संसद् विघटन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसमा बदनियत कहाँनेर देखिन्छ ? त्यो बताइदिनुस् ।’
मल्लले विकल्पहीन रूपमा संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणालाई पनि व्याख्या गर्न पनि अनुरोध गरिन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो अन्तरनिहीत अधिकार रहेको तर्कमा जोड दिँदै उनले यस्तो प्रश्न सोधेकी हुन् ।
सपना प्रधान मल्लclose